Arday aad u badan oo laga la noqday deeqdii ardayda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Arday aad u badan oo laga la noqday deeqdii ardayda
La daabacay onsdag 10 juli 2013 kl 12.40
Sannad-dugsiyeedkii 2012-2013 waxaa deeqda dhaqaale ee ardayda la siiyo laga joojiyey ardayda gaareysa 21000 oo dhigata dusgiyada sare. Sababta looga joojiyeyna waxay ahayd iyagoo waxbarashada u gooyey ama marar badan ka maqnaaday dugsiyada. Tiradaasina waa tiro aad u badan oo boqolkiiba 6 ka ah ardayda dugsiyada sare. Waxaana lacagtaan ardayda laga joojiyey sabab u ah iyadoo sannadkii 2012 la soo xeer adkeynaya habka ay Hay’adda Gargaarka ardaydu (CSN) u shaqayso. Labadii sannad-dugsiyadeedyadii ka horreeyey waxay tiradaasi ahayd boqolkiiba 5,5 iyo 4,4.
Wixii ka horreeyey 1dii Jannaayo 2012 waxaa ardayda loogu dulqaadan karay in uu waxbarashada ka maqnaado boqolkiiba 20 waqtiga waxbarashada iyadoo aan lacagta laga goosan. Taasina waxay u dhigantaa toddobaadkii hal maalin. Laakiin wixii ka dambeeyey 1dii Jannaayo 2012 waxaa dugsiyada khasab ku noqonaya in ay wixii maqnaansho ruqsad-la’aan ah ama maqnaanshahaasi ka bato dhawr saac bishii ku soo wargeliyaan hay’adda gargaarka ardayda. Hay’adda ayaa sannadkaan markii ugu horreysey is barbardhigtay farqiyada u dhexeeya maqnaanshaha ruqsad-la’aanta ah ee dugsiyo kala duwan.
Ardayda waxbarashada ka sagsaagta boqolkiiba 63 waa wiilal, halka ay gabdhuhu ka yihiin boqolkiiba 37. Dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa kaga badan dugsiyada dowladda soo sheegidda ardayda waxbarashada ka sagsaagta.